Ma jiraan wax dalka Iswiidan/ummadda iswiidishka u gaar ah? | Informationsverige.se
Bogga ugu horeeya ee goobta intarnat-ka / Anigu waxaan helay sharciga deganaanshaha / Barashada bulshada / Buuga "Om Sverige" / Imaansha dalka Iswiidhan / Ma jiraan wax dalka Iswiidan/ummadda iswiidishka u gaar ah?
Dad badan waxeey uu arkaan guriyada yar ee gaduudan in ee yihiin sifo lagu yaqaan iswiidhishka. Masawirqaade: Colourbox
Diinta krishtanka markii laga rebo waxaa kale oo Iswiidhan joogo dad badan oo diimooyinka kale leh. Waxaa ka mid ah islam, diinta hiinduuska, diinta jahuuda, diinta buudistaha, diinta bahá'í, asatro, schamani iyo katolika iyo ortodokiska.